पासपोर्ट मात्र हुनेले पैसा कसरी पठाउने ? | Gmoneytrans
यो सेवा कसले प्रयोग गर्न मिल्छ?
यो सेवा कोरियामा हुने जो सुकैले लिन मिल्छ । मोबाईल एप दर्ता गर्न नसक्नु भएको महानुभाव लाई यो सेवा अझ लाभदायक हुन्छ । अटो सेन्ड खाता दर्ता गर्नलाइ नजिकैको जिमनी ट्रान्स को शाखा वा एजेन्टलाइ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
आवश्यक पर्ने कुराहरु:
१) पासपोर्ट अथवा Alien कार्ड
२) नेपालमा पैसा पाउनेको विवरण
नोट : पैसा पठाउदा बैंक खाता र नगद भुक्तानी दुवै गर्न सक्नुहुनेछ
कसरि पैसा पठाउने ?
अटो सेन्ड खाता प्रयोग गरेर पैसा पठाउने तरिका कोरिया बाट कोरिया पैसा पठाएजस्तै हो । अटो सेन्ड खातामा खाता ननंबर हुन्छ र सो खाता नम्बरमा पैसा हाल्नु भयो भने जसको नाममा खाता रजिस्टर भएको छ नेपालमा उसैको खाता मा पैसा जम्मा हुन्छ । एउटा खाता नम्बर एउटा मान्छेको लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पैसा पठाई सकेपछि तपाइको मोबाईल नंबरमा मेसेज आउनेछ ।
पैसा पठाउने बैंकको चयन गर्न लाई कार्डको पछाडी जानकारी दिईएको हुन्छ । बैंकको नाम एटिएम अनुसार फरक पर्न सक्दछ । एटिएम बाट ट्रान्सफर गर्दा बैंक को नाम “FSBC/FSB/KFSB/FSBC50/FSB50” मध्ये कुनै हुन सक्दछ । बैंकको कोड 50 वा 050 हालेर पनि बैंक चयन गर्न सकिन्छ ।
ट्रान्सफर गर्ने रकम कसरि थाहा पाउने ?
जिमनी ट्रान्स एप डाउनलोड गरी देश चयन गर्ने र ट्रान्सफर गर्न चाहेको नेपाली रकम टाइप गर्ने । त्यसपछि त्यसको रुपान्तरित कोरियन पैसा देखाउछ, त्यसमा १ जोडी सो रकम ट्रान्सफर गर्ने ।
-बार्षिक लिमिट ५०,००० डलर
-प्रत्येक कारोबार लिमिट ५,००० डलर
Official FB: https://www.facebook.com/gmoneytrans.nepal
Support Centre: 1670-4565 Press 1 for Nepali